Zuva: Ndira 11, 2020
International Transport and Logistics Service Vagadziri Association UTİKAD vakasangana nenhengo dzezvenhau musi weChina, Ndira 9. Emre Eldener, Sachigaro weUTİKAD Board of Directors pamusangano wevatori venhau wakaitirwa kuInterContinental Istanbul Hotel, [More ...]
Turkey ane Enlarge Legrand Gear!
Chivako, izvo anovandudza zvinhu uye hurongwa kuti zvemagetsi uye digitaalinen zvinokosha French hofori Legrand Group anopfuurira kushandisa kuTurkey. Zvisinei nekushomeka kwehupfumi hwazvino, fekitori idzva yeInfomes [More ...]
Channel Istanbul Herald Yenyika Dzematambudziko
Kutaura paChannel Istanbul Workshop, Gweta uye Ambass Att. Rıza Türmen uye mumwe mudiki Rear Admiral Türker Ertürk vakati kuti chiteshi icho chichagadzwa chinounza matambudziko matsva pasirese yenyika. 1st Istanbul Metropolitan Municipality Legal Zano [More ...]
Channel Istanbul Kupesana neParis Chibvumirano
Muchirongwa chemasikati cheChannel Istanbul Workhop, Sabancı University Climate Studies Coordinator, nhengo yeBoazazi yeNi University, akaita mharidzo. Umit Sahin, Chibvumirano cheParis cheChannel Istanbul chirongwa chiri kupokana nechibvumirano, akadaro. [More ...]
The Republic of Turkey State Railways (TCDD) akagadzirisa musarudzo, kusvikira 07.02.2020/XNUMX/XNUMX musi pamwechete yaidiwa magwaro TCDD General Directorate of Human Resources Dhipatimendi Kudomwa uye Kuparadzana Branch kana yedu Regional Office (Haydarpasa-Ankara-Izmir-Sivas-Malatya uye Adana Afyon) Human [More ...]
Matsamba anodikanwa kubva kuvavhotera anogadzwa pachena kunzvimbo dzeTCDD Taşımacılık A.Ş. mukati mechikamu cheSocial Services Law Nhamba 2828 inounzwa pazasi kuti uwane ruzivo. DZIDZO DZINODZIDZWA 1) Hutano hweBhodhi Hutano (Hwakazara Mauto Ezvipatara) [More ...]
Nhasi Munhoroondo Yekare 11 January 1871 yakabvumira mutambo wePlovdiv-Burgas. 11 January 1999 M2 Motokari dziri pa Şişhane - Hacıosman Metro Line dzakaderedzwa kusvika mumugwagwa.